Kulankii Golaha Kabineega DDSI Oo Furmay - Cakaara News
Kulankii Golaha Kabineega DDSI Oo Furmay
Jigjiga(cakaaranews)khamiis 15ka september 2016. Waxaa galinkii danbe ee maanta ka furmay hoolka shirarka ee xafiiska madaxtwaynaha kulankii caadiga ahaa ee golaha kabineega oo uu hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Hadaba, kulankan ayaa waxaa ugu horayn furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar soona hordhigay golaha ajandayaasha kulanka oo ahaa:- sii xoojinta iyo dardargalinta hawlaha horumarka, nabadgalyada, iyo maamulka suuban ee sanadka 2009TI.
Kadibna golaha kabineega DDSI ayaa falanqeeyay islamarkaana kadooday sidii loo sii xoojin lahaa shaqooyinka horumarka ee 2009 T.I islamarkaana loo sii adkayn lahaa hawlaha nabadgalyada gaar ahaan dhanka xuduudaha iyo waliba sii adkaynta nidaamka dib-u curashada ee maamulka suuban iyadoo halkaa lagu qiimeeyay dhinacyadii adkaa iyo galdalooladii jiray sanadkii hore. Golaha ayaana cod buuxa iskulaqaatay in lasii adkeeyo geediga horumarka iyo nabadgelyada DDSI si looga midho-dhaiyo qorshaha sanadka iyo waliba qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha wajigiisa 2, aad.
Ugudanbayna, Kulankan ayaa kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan iyo niyad kamidaysan sidii shacabka deegaanka horumar waara oo aan dib unoqosho lahayn loo gaadhsiin lahaa.